एजेन्सी, नयाँदिल्ली । क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन् । सौर्य दैनिकमा प्रकाशित लेख ।
तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्रा्ष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल संख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ।
मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको खेलमा सुनील छेत्रीले दुई गोल गर्दा भारत ४–१ ले विजयी मात्रै भएन, क्षेत्रीले १०५ खेलमा व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रिय गोल संख्या ६७ पुर्याउदै सक्रिय खेलाडीहरूको गोल संख्यामा मेस्सी र नेयमारभन्दा माथि उक्लिए। मेस्सीले अहिलेसम्म आर्जेन्टिनाका लागि १२८ खेलमा ६५ गोल र नेयमारले ब्राजिलका लागि ९५ खेलमा ६० गोल गरेका छन्।रोनाल्डोभन्दा छेत्री निकै पछाडि नै छन्। रोनाल्डोले पोर्चुगलका लागि १५४ खेलमा ८५ गोल गरिसकेका छन्।
छेत्री सक्रिय खेलाडीहरूको सूचीमा दोस्रो स्थानमा भए पनि सबैभन्दा बढी अन्तर्रा्ष्ट्रिय गोल गर्ने खेलाडीहरूको सूचीमा २० औँ स्थानमा छन्। इरानका अलि देई १४९ खेलमा १०९ गोलसहित शीर्षस्थानमा रहेको सूचीमा छेत्रीभन्दा तल डिडियर ड्रोग्बा र ब्राजिलका रोनाल्डो छन्।
नेपाली मूलका भएका कारण छेत्री नेपाली फुलबल समर्थकमाझ प्रिय छन्। नेपालविरुद्ध खेल्दा भने उनके प्रदर्शन नेपाली समर्थकमाझ अप्रिय बन्छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न शुरू गरेयता भारतले नेपालसँग नौवटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय खेल खेलेको छ, जसमध्ये उनले आठ खेल खेलेर पाँच गोल गरेका छन्। र, तीमध्ये छ खेलमा भारत र एक खेलमा नेपाल विजयी भएको छ।
३४ वर्षीय सुनील छेत्री भारतीय सुपर लिगमा बेङ्गालुरु फुटबल टोलीका कप्तान हुन् । ‘क्याप्टेन फ्यान्टास्टिक’ उपनामले चिनिने छेत्री भारतीय राष्ट्रिय टोलीबाट सबैभन्दा बढी खेल खेल्ने खेलाडी समेत हुन् । गत वर्ष एशियाली फुटबल परिषद् (एएफसी) ले छेत्रीलाई ’एशियन आइकन’ घोषणा गरेको थियो । छेत्रीका बुवा भारतीय सैनिक टोलीबाट फुटबल खेल्थे भने उनकी आमा सुशीला छेत्री नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीको सदस्य थिइन् ।
सन् २००२ मा मोहन बगानसँग आबद्ध भएर व्यावसायिक रूपमा खेल्न शुरू गरेका छेत्रीले २००५ देखि भारतको राष्ट्रिय टोलीबाट पाकिस्तानविरुद्ध पहिलो खेल खेलेका थिए र गोल पनि गरेका थिए । त्यसयता छेत्रीले सन् २००७, २०११, २०१३, २०१४ र २०१७ मा गरी पाँच पटक भारतका उत्कृष्ट खेलाडीको पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका छन् । सुनील छेत्री फुटबलमा भारतको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिने एएफसी च्यालेञ्ज कप २००८ जित्ने बेला नायक थिए । प्रतियोगितामा उनले ४ गोल गरेका थिए ।
प्रकाशित : बिहिबार, पुष २६, २०७५०९:४५
ठूलो दुर्घटनाबाट बच्यो बंगलादेश क्रिकेट टिम, अज्ञात समुहले चलाएकोे गोलीमा ९ को मृत्यु !
प्रदेश नं. ३को यस ठाउमा हुँदैछ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण,प्रक्रिया शुरु
साल्केविरुद्ध १० खेलाडीमा सिमित सिटीको रोमान्चक जित !